NomzamoMbatha | Londoloza Isitimela
Umbhali: Emma Insimbi
Ikhaya > Emma Insimbi
U-Emma usebenza njengomxhumanisi nezinkampani ezivela emazweni ahlukene. Umsebenzi wakhe udinga ukuhamba kaningi ukuze axhumane ngqo nabantu asebenza nabo, njengoba ukuhamba kuyindlela yakhe yokuzilibazisa kwenza umsebenzi wakhe ube ophelele. Uyakujabulela nokubhala ngezikhathi ezithile izindatshana ezihlobene nokuhamba, kodwa futhi nempilo nendlela yokuphila. - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze Xhumana noRebecca
ngu Emma Insimbi
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi Kulo nyaka unethuba lokuhlola izimangaliso zomhlaba njengoba imithetho yezokuvakasha iqhubeka yenziwa ibe nhle. Izindawo zokuvakasha ebezivaliwe phambilini zivulwa kancane kancane njengoba umhlaba ulungela ukuhlala nalo bhubhane. Nazi 8 Kuhle…
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Russia, Izikhangibavakashi Europe, Ukuhambela i-U.S.A
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi Ukuhlela uhambo lodwa kungaba matasa ngisho nakumhambi onolwazi, ikakhulukazi uma kuziwa ekukhetheni indawo efanele yokuvakasha nemisebenzi efanele ukubamba iqhaza lapho ulapho. Kepha okubaluleke kakhulu, ngoba ufuna ukwenza okungcono kakhulu ngakho…
Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi IYurophu yizwekazi elihola phambili maqondana ne-vibrant, kuhlalwe, namadolobha anamuhla agcwele ubumnandi. Kunenqwaba yezimangaliso zokwakha, iminyuziyamu, nezindawo zokudlela kuwo wonke amazwe aseYurophu ongazicabanga. Impilo yasebusuku kanye nezindawo zokudla kulo lonke izwekazi ziya ngemuva. Izilwane zasendle…